အမေဇုံတက်ဘလက်အသစ် FCC တွင်ပေါ်လာ eReaders အားလုံး
FCC မှာ Amazon တက်ဘလက်အသစ်တစ်လုံးပေါ်လာတယ်
Joaquín Garcia က | | Amazon Kindle
မနေ့ကငါတို့ဘယ်လိုမြင်တယ် မီး 8 HD စတော့ရှယ်ယာ ကုန်ပစ္စည်းပြတ်တောက်သွားပြီး Amazon ကဒီမော်ဒယ်လ်မရှိရင်ခဏသာကြေငြာမယ်လို့ကြေငြာလိုက်သည်။ ၎င်းသည်လူအများအား Amazon အကြောင်းသတင်းများကိုရှာဖွေစေပြီး၎င်းကိုသူတို့တွေ့ပြီဟုထင်ရသည်။
FCC ကခြေရာခံခြင်း တက်ဘလက်လက်မှတ်အသစ်တစ်ခုကိုတွေ့ပြီ Amazon ကနေဖြစ်နိုင်တယ် အမေဇုန်ကိုလိုက်နာတဲ့အချိန်ကစပြီးကျွန်တော်တို့ဟာ»လုပ်နိုင်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ် တတိယပါတီကုမ္ပဏီတွေသုံးပြီး သူတို့ရဲ့ထုတ်ကုန်တွေကိုဖုံးကွယ်ဖို့ကတော့ဒီအမှုအရာမှာတက်ဘလက်ဟာအမေဇုံကနေဆိုတာသံသယဖြစ်စရာမရှိပါဘူး။
La FCC လက်မှတ် ဖန်တီးထားတဲ့စက်အကြောင်းပြောထားသည် Polebridge ဆိပ်ကမ်း Hole ကုမ္ပဏီကပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်Amazon အကြောင်းကုမ္ပဏီများမှထုတ်ကုန်များထုတ်လွှင့်ရန်ကုမ္ပဏီများကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့အကြောင်းလုံးဝနီးပါးမသိသောကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤ FCC အစီရင်ခံစာသစ်သည် Wifi နှင့် Bluetooth ဆက်သွယ်မှုကိုထောက်ခံသော်လည်းဖန်သားပြင်နှင့် ပတ်သက်၍ ဘာမှမပြောနိုင်ပါ မည်သည့်ပုံစံကိုအစားထိုးမည်ကိုကျွန်ုပ်တို့မသိပါ.
ကောလဟာလများစွာက Amazon ၏ဒေါ်လာ ၅၀ တန်အသစ်ဖြစ်သောအသစ်ထွက်လာမည်ဖြစ်သော်လည်းလက်ရှိတွင် Fire 50 အကြောင်းသာပြောမည်ဖြစ်ရာ Fire မိသားစု၏မည်သည့်ပုံစံကိုပြန်လည်သက်တမ်းတိုးမည်ကိုသံသယဖြစ်စရာရှိသည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေကာစီအက်ဖ် (FCC) ကညွှန်ပြသည့်အမေဇုန်တက်ဘလက်အသစ်ရှိလိမ့်မည်ဟုငါတို့သိထားသည် microsd ကဒ်များနှင့်ကင်မရာတစ်ခုအပေါက်တစ်ခုသိပ်မများပေမယ့်အနည်းဆုံးတော့ Amazon မျိုးဆက်သစ်တက်ဘလက်တွေဟာသူတို့ရဲ့သိုလှောင်မှုကိုတိုးချဲ့ဖို့ဖြစ်နိုင်ချေရှိတယ်ဆိုတာအနည်းဆုံးတော့သိထားတယ်။
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရထင်မြင်ချက်အရ Amazon Device အသစ်သည် Fire 8 တက်ဘလက်ကိုအစားထိုးလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်ထုတ်ကုန်တစ်ခုမစတင်မီအမေဇုံမှစတော့ရှယ်ယာကိုသန့်ရှင်းအောင်လုပ်ရန်သို့မဟုတ်ကြိုးစားရန်ဖြစ်သည်။ သို့သော်၎င်းသည် Fire 50 ကိုသက်တမ်းတိုးခြင်းမဟုတ်ပါသို့မဟုတ် eReaders အသစ်များစတင်မည်မဟုတ်ဟုမဆိုလိုပါ။ သူဘယ်လိုတွေ့ခဲ့တယ်ဆိုတာငါတို့ကောင်းကောင်းမြင်နိုင်တယ်လာမည့်ရက်အနည်းငယ်တွင် Fire 8 သို့မဟုတ် $ 50 Fire သာမက eReaders အမြောက်အမြားကိုလည်းပြန်လည်သက်တမ်းတိုးလိမ့်မည်.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - eReaders အားလုံး » ကုမ္ပဏီများမှ » Amazon Kindle » FCC မှာ Amazon တက်ဘလက်အသစ်တစ်လုံးပေါ်လာတယ်
အီတလီလူမျိုးလူငယ်များသည်ယဉ်ကျေးမှုအတွက်သုံးစွဲရန်ယူရို ၅၀၀ ရရှိမည်ဖြစ်သည်
ကျွန်ုပ်တို့၏ eReaders သည် Android ဗားရှင်းအသစ်ကိုသိပါသလား။